Booliska oo baaritaano ugu jira labadii nin ee maanta toogashada ka geystay Magaalada Paris - iftineducation.com
Booliska oo baaritaano ugu jira labadii nin ee maanta toogashada ka geystay Magaalada Paris
iftineducation.com – Ciidanka Booliska ee Magaalada Paris, ayaa waxay wadaan baaritaano xoogan oo lagu baadi-goobaayo raggii maanta weerarka abaabulan ku qaaday Wargeyska Charlie Hebdo, oo ah wargeys toddobaadle ah.
Raggaan, ayaa toogasho ku dilay 12 ruux, iyadoo ku dhawaad 10 kalana la sheegay inay dhaawacyo kala duwan u geysteen, iyadoo dhaawacyada qaarkood ay yihiin kuwo culus.
Booliska, ayaan ogayn halka jaan iyo ciriba ay dhigeen raggii weerarkaasi geystay, waxayna taasi keentay in heegan buuxo la geliyo Ciidamada Dowladda Faransiiska.
Khabiir ka tirsan Faransiiska oo sharaxaad ka bixinaayay ragga weerarka geystay, ayaa wuxuu ku sheegay inay yihiin rag heysta tababar aad u sareeya, ayna suurta gal tahay inay xirnaayeen jaakadaha aynaan rasaastu karin.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo cambaareeyay weerarkaasi, ayaa wuxuu ku sheegay mid wuxuushnimo ah, isla-markaana ay baarayaan kuwii geystay.
Wargeyskaan, ayaa sanadkii hore lagu weeraray qarax, markii kartoon jees jees ah uu ka sameeyay Nebi Muxamed Caleehi Salaatu Wasalaam, iyadoo Muslimiintana si weyn kaga caroodeen kartoonkaasi.
Weerarkaan wuxuu noqonayaa markii ugu horeysay oo dalkaasi uu ka dhaco, muddo 30 sano ah.
Nin Hubeysan Oo Dhakhtar Dilay Isagiina is dilay kadib markii uu weeraray Isbitaal ku yaala Magaalada El Paso ee Gobolka Texas Daawo muuqaal